Linux ပေါ်ရှိ GIS (ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်) - ရနိုင်သောပရိုဂရမ်များ Linux မှ
Linux ရှိ GIS (Geographic Information System) - ရနိုင်သောပရိုဂရမ်များ
အ GIS (ပထဝီသတင်းအချက်အလက်စနစ်၊ ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်) ကခွင့်ပြုသည် ပထဝီအနေအထားအရရည်ညွှန်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်databases မှအချက်အလက်များကိုအလွှာများ၊ raster (bitmap) နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်း။ GIS အတွက်ဖိုင်ပုံစံများမြောက်မြားစွာ (ဥပမာ GeoTIFF, DRG သို့မဟုတ် SID) နှင့်အခြား vector (ဥပမာ ESRI-Shapefile, GML, DXF, MapInfo File or) ကျား) ။ ဒါ့အပြင်လည်းရှိပါတယ် GIS များအတွက်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များ; ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချို့ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့ Linux အတွက်ရနိုင်သည်.
၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရန်သင်လိုအပ်သည် သင်၏ distro ၏ package manager တွင်ရှာဖွေပါ ဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာ installer ကိုထုတ်ကုန်ရဲ့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေကူးယူပါ။
2 ကွမ်တမ် GIS
3 စစ်ကိုင်း GIS
7 geospatial စာကြည့်တိုက်
gvSIG သည်အဓိကအားဖြင့် gvSIG Desktop နှင့် gvSIG Mobile applications များပါ ၀ င်သည့် Geographic Information Systems အတွက်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ gvSIG Desktop သည် gvSIG ပရောဂျက်တွင်ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့သော application ဖြစ်ပြီး၎င်းကို gvSIG ဟုလည်းလူသိများသည်။
gvSIG Desktop သည် GNU GPL v2 လိုင်စင်အောက်တွင်ဖြန့်ချိသောပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ OGC ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသော vector နှင့် raster အချက်အလက်အပြင်မြေပုံဆာဗာများသို့လည်း ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသည်သည်အခြားပထဝီဝင်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်များ၊ OGC ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အရေးကြီးသောအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် gvSIG ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ။
၎င်းကို Java ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီး Microsoft Windows, Linux နှင့် Mac OS X လည်ပတ်မှုစနစ်များဖြင့်လည်ပတ်သည်။ Geotools သို့မဟုတ် Java Topology Suite (JTS) ကဲ့သို့သောအသိအမှတ်ပြု GIS စံစာကြည့်တိုက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ gvSIG တွင် Jython အပေါ်အခြေခံသော scripting language တစ်ခုရှိပြီး gvSIG အတန်းများကို အသုံးပြု၍ extensions များကို Java တွင်လည်းဖန်တီးနိုင်သည်။
အသုံးအများဆုံးဂရပ်ဖစ်ဖိုင်အမျိုးအစားများထဲတွင်၎င်းတွင်အခြားသူများအကြားအားနည်းသောပုံစံများဖြစ်သော GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML နှင့် MRSID, GeoTIFF, ENVI သို့မဟုတ် ECW ကဲ့သို့သောရုပ်ပုံပုံစံများကိုရယူနိုင်သည်။
Quantum GIS (သို့မဟုတ် QGIS) သည် GNU / Linux, Unix, Mac OS နှင့် Microsoft Windows ပလက်ဖောင်းများအတွက် open source Geographic Information System (GIS) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် OSGeo ဖောင်ဒေးရှင်း၏ပထမဆုံးစီမံကိန်းရှစ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်ပေါက်ဖွားမှုအဆင့်မှတရားဝင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် raster နှင့် vector ပုံစံများအပြင် database များကိုပါခွင့်ပြုသည်။ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအချို့မှာ:
PostgreSQL Spatial တိုးချဲ့မှု PostGIS ကိုထောက်ပံ့သည်။
ဖိုင်ဖိုင်များကိုကိုင်တွယ်ခြင်း Shapefile, ArcInfo အဖုံးများ၊ Mapinfo, GRASS GIS စသည်တို့
သိသာထင်ရှားသော raster ဖိုင်အမျိုးအစားများ (GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG စသဖြင့်) အတွက်ပံ့ပိုးမှု
၎င်း၏အကြီးမားဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ Quantum GIS ကို SIG GRASS ၏ GUI အနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုသည်။ QGIS ကို C ++ တွင်တီထွင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ Graphical User Interface အတွက် Qt library ကိုအသုံးပြုသည်။
ကွမ်တမ် GIS ဝက်ဘ်
SAGA (အလိုအလျောက် geoscientific ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာဖြင့်အလိုအလျောက် geoscientific ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုစနစ်အတွက်အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်) သည်ပေါင်းစပ်ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည် (ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုကြည့်ပါ) ။
SAGA ၏ပထမဆုံးရည်မှန်းချက်မှာ၎င်း၏ပရိုဂရမ်းမင်း interface (API) မှတစ်ဆင့် geoscientific နည်းလမ်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်ထိရောက်လွယ်ကူသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယနည်းမှာဤနည်းလမ်းများကိုလွယ်ကူစွာရရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို၎င်း၏ graphical user interface (GUI) မှတဆင့်ရရှိသည်။ အတူတကွ API နှင့် GUI တို့သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသော geoscientific နည်းလမ်းများဖြစ်သော SAGA ၏စစ်မှန်သောအလားအလာဖြစ်သည်။
Saga GIS က်ဘ်ဆိုက်
GMT ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် http://gmt.soest.hawaii.edu/ တွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း၊ Generic Mapping Tools ကိုရည်ညွှန်းသော GMT သည်ဆိုလိုသည်မှာမြေပုံများထုတ်လုပ်ရန်အတွက် Tools များသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များဖြစ်ပြီးပတ်ပတ်လည်တွင်ပါဝင်သည် ပထဝီဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရှုထောင့် ၂ ခုနှင့်သုံးခုရှိအချက်အလက်များအတွက်စီစစ်ခြင်း၊ စီစစ်ခြင်း၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအစရှိခြင်းတို့အတွက် script ၆၀ ။ သရုပ်ဖော်ပုံများကိုသုံးဖက်မြင်ရေးဆွဲချက်များမှသုံးဖက်မြင်မျက်နှာပြင်များအထိ Postscript ဖိုင်များဖြင့်ဖန်တီးနိုင်သည်။ GMT သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပထဝီအနေအထားအရခန့်မှန်းခြေအမျိုးအစား ၃၀ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးမြစ်များ၊ ကမ်းရိုးတန်းများနှင့်အမျိုးသားနယ်နိမိတ်များရှိ၎င်း၏ဖိုင်များတွင်ပါဝင်သည်။
သူတို့ဆီကလက်တစ်ဆုပ်စာလောက်ပဲလိုအပ်တယ်။ GMT သည်ကမ်းရိုးတန်းများ၊ နယ်နိမိတ်များ၊ မြစ်များနှင့်ရေကန်များကို virus သယ်ဆောင်သူများ (သင်္ချာအကန့်အသတ်များကဲ့သို့) အဖြစ်လည်းဖတ်ရှုနိုင်ပြီးပြောင်းလဲမှုများမှတစ်ဆင့်လူသိများသောပထဝီဆိုင်ရာဒေတာဘေ့စ်များနှင့်လည်းတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်။
GMT သည်မူလက graphical user interface မရှိပါ။ မြေပုံများကိုထုတ်လုပ်ရန်သင်ပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုနေသည့် operating system ၏ command interpreter (command line) ကိုအသုံးပြုရမည်။ ဤတွင်ဤနေရာသည်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော parameters များပါသော command များထည့်သွင်းထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် PostScript, extension ps နှင့်အတူဖိုင်တစ်ခုထုတ်ပေးသည်။ ဤသို့ဖန်တီးလိုက်သော Postscript ဖိုင်ကိုအခြား format များအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး image editing program ဖြင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်ထားသောမြေပုံများသည် GNU အခမဲ့မှတ်တမ်းပြုခွင့်လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်။
ဝက်ဘ် GMT & ဝီကီပီးဒီးယားမှအကူအညီ
GRASS (ပထဝီဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအထောက်အကူပြုစနစ်အတွက်အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်) သည် GPL (အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်) လိုင်စင်အောက်ရှိ GIS (ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်) ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် raster နှင့် vector information နှစ်ခုလုံးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးဒီဂျစ်တယ်ပုံရိပ်ပြုပြင်ရေးကိရိယာများရှိသည်။
အစအ ဦး ၌ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အားအမေရိကန်စစ်တပ်ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာသုတေသနအင်ဂျင်နီယာကော်ပိုရေးရှင်း (USA-CERL) ကတီထွင်ခဲ့သည် - ကာကွယ်ရေး ဦး စီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ရှိနယ်မြေများအားကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောစျေးကွက်တွင် GIS ။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်အင်တာနက်မှတဆင့်အများပြည်သူသိရှိနိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများတွင်လူကြိုက်များသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် USA-CERL GRASS ကအစီအစဉ်ကိုမထောက်ပံ့တော့ဟုကြေငြာသောအခါ Baylor တက္ကသိုလ်သည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်။ ဤရက်စွဲအရပညာရေးလောကတွင်လက်ခံမှုတိုးများလာသည်။ ၁၉၉၉ အောက်တိုဘာ ၂၆ တွင်ဗားရှင်း ၅.၀ ဖြင့်ပရိုဂရမ်ကုဒ်ကို GNU GPL လိုင်စင်အောက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ GRASS သည် OSGeo ဖောင်ဒေးရှင်း၏ပထမဆုံးစီမံကိန်းရှစ်ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်သူသည်ပေါက်ဖွားမှုအဆင့်မှတရားဝင်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
Linux တွင် GRASS အတွက်ဂရပ်ဖစ် interface သည် QGIS ဟုလည်းလူသိများသော Quantum GIS ဖြစ်သည်။
(GPS တွင်အသုံးပြုသော) GPX အမျိုးအစားမှ (GIS တွင်အသုံးပြုသော) ESRI-Shapefile ပုံစံသို့ပြောင်းသည်။
GIS အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက - OSGeo။ သင်လည်းစိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည် OpenStreetMap.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » Linux ရှိ GIS (Geographic Information System) - ရနိုင်သောပရိုဂရမ်များ
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်အစ်မနဲ့အစ်ကိုယောက္ခမကပထ ၀ ီပညာရှင်တွေပါ။ သူတို့ကို Linux နဲ့ Word and Truth ကိုငါခေါ်လာတိုင်း GIS နဲ့အတူသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး Linux မှာလိုက်ဖက်တဲ့အရာတော့မရှိခဲ့ဘူး၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုး၏သက်တောင့်သက်သာမရှိသောလမ်းမှလွတ်မြောက်ရန်အငြင်းပွားမှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုများရှိသည်။
Google Earth နဲ့တူလား ??
မင်္ဂလာပါ ငါ Gvsig နှင့် Quantum နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည် အမှန်တရားကတော့သူတို့ဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးအားကောင်းတဲ့ကိရိယာတွေပါ။ =)
လုံးဝမ ဤရွေ့ကားкадастры, ပထဝီ, hydrographic လေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်ရန်, အများကြီးပိုအစွမ်းထက် tools များဖြစ်ကြသည်။
သြဂုတ်လ 9, 2011 တွင် 13:10 pm တွင်, Disqus
စာမျက်နှာရှိလူများပြောသကဲ့သို့သူတို့သည်မြေပုံများကိုစီမံခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ သင့်တွင်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်မှုရှိပါကသင်သည်လမ်းကြောင်းများ၊ အချက်များနှင့် 3d ရုပ်ပုံများကိုပင်ထုတ်ယူနိုင်သည်၊ အချို့ဆာဗာများမှမြေပုံများ၊
သင်သည်၎င်းကို Postrgres သို့ ဆက်သွယ်၍ ဒေတာများကိုအွန်လိုင်းမွမ်းမံမှုများပြုလုပ်နိုင်သည် .. =)
သတိပြုရမည်မှာ Earth သည်အချို့သောအခြေအနေများတွင် static နှင့်စီးပွားဖြစ်ရုပ်ပုံများဖြစ်ကြောင်း၎င်းကိုအသုံးပြုရန်လိုင်စင်ရှိရမည်ကိုသတိရပါ။ သို့သော်သင်အလိုရှိပါက wiki အတွေးအခေါ်နှင့်အလုပ်လုပ်သော OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) ဟုခေါ်သောစီမံကိန်းတစ်ခုရှိပါလိမ့်မည်။
ငါပြောနိုင်သည်မှာ၎င်းသည်ဆင်တူသောလုပ်ဆောင်ချက်များ (အမှတ်အသားများ၊ ပုံများ၊ အလွှာများစသည်တို့) ရှိသည်ဟုအဓိပ္ပာယ်တူသောကမ္ဘာနှင့်ဆင်တူသော်လည်းကြီးမားသောခြားနားချက်မှာသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာကိုသင်၏မြေပုံများဖြင့်တပ်ဆင်ပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု။
အလွန်ကြီးမားသော entry ကိုသူငယ်ချင်း!
အတိအကျ ဂူဂဲလ်မြေပုံများအတွက်အခမဲ့ရွေးချယ်စရာမှာ OpenStreetMap ဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ရွေးချယ်စရာမှာ Marble ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 9, 2011 တွင် 13:59 pm တွင်, Disqus
ဒါ Moscov ပါ! ကံကောင်းထောက်မစွာ, အခမဲ့အစားထိုးပို။ ပို။ ရှိပါတယ်။
သြဂုတ်လ 10, 2011 တွင် 05:59 pm တွင်, Disqus
takeoff - KDE အတွက် application launcher အသစ်သည် Mac OS X နှင့်ဆင်တူသည်
ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Wi-Fi ကွန်ယက်များတွင်မည်သို့အန္တရာယ်ကင်းစွာဝင်ရောက်နိုင်မည်နည်း